မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: Industrial ASP.Net(intro)
ကိုချမ်းကတော့ ခွေးနက်ကြီးလို့ ပြောတယ်။ ဘာကိုဆိုလိုမှန်းတော့ သိပါဘူး။ကျမ သိတဲ့ လောလောဆယ်သင်နေတဲ့ Industrial ASP.Net အကြောင်းတော့ နည်းနည်းထပ်ဖွချင်ပါသေးတယ်။မြည်းလို့ကို မပြီးနိုင်ဘူးလို့တော့ ခွန်မြလှိုင် ပြောဦးမယ် ထင်ပါရဲ့သည်းခံနော် စစ်Industrial ASP. Net ဆိုတာ Dynamic Web Application တွေကို developလုပ်ဖို့လို့ C# ဆိုတဲ့ programming language နဲ့ ASP. Net ဆိုတဲ့technology ကို ပေါင်းသုံးပြီး ရေးတာပါ။အဲဒီ C# ဆိုတဲ့ programming language ရော ASP. Net ဆိုတဲ့ technologyရောက dot Net ဆိုတဲ့ frame work ကို အခြေခံထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေလို့ပြောလို့ ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာ ကျမတို့တွေ များသောအားဖြင့် programming language ဆိုတာနဲ့technology ဆိုတာကြီးကို ကွဲကွဲပြားပြား မသိကြတာပါပဲ။ကျမဆိုရင် programming language တွေ အရင်က ဘာတွေ သင်ဖူးလဲလို့ဆရာကမေးတုန်းက ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ HTML, CSS, DreamWeaver, FrontPage,ColdFusion နဲ့ Java script, C, C++ တွေ သင်ဖူးတယ်။ အဲဒါတွေသုံးပြီးprogram တွေ website တွေ ရေးဖူးတယ်လို့။ (ဟိုက် ရှာလပတ်ရည်.. တယ်တော်တဲ့ငါပါလားပေါ့ ။ ပြောရတာ အရသာရှိ အားရှိ ဘေးနားကြားတဲ့သူတွေကတော့သောက်ညင်ကတ် ဒါပေသိ ဆရာကတော့ အထင်ကြီးသွားပုံမပေါ်)ဆရာက ပြန်ပြောပါတယ် အော်.. COM user ခေတ်ကတည်းကကိုးတဲ့။ဟုတ်ပါတယ် ကျမက ဒေါ့ နက်ဆိုတာကြီး လုံးဝမသိပါဘူး။ 2004ကစလို့ Tourismလောကထဲကို ခြေစုံပြစ်ပီး ၀င်ခဲ့တာပါ။ ကံကောင်းတာက IT နဲ့ ကျမနဲ့က လုံးဝအဆက်ပြတ်မသွားခဲ့တာပါပဲ။ (လျှာရှည်ပြန်ပြီ အဟိဟိ)ဆရာက ပြောပါတယ်.. Web Application ရေးလို့ ရတဲ့ Technologies တွေကတဲ့ASP, Servelet, JSP (JAVA သုံးတဲ့) တို့ PHP, ColdFusion, Ruby On Railနဲ့ ASP.Net တွေတဲ့။ ဒါတွေ ရဲ့ အရင် ရှေးရှေးတုန်းက CGI(Common GatewayInterface) ဆိုတဲ့ Technologies တွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်တဲ့။ အဲဒါကိုမှprogramming languages တွေ (Perl, Phython, C) တို့နဲ့ တွဲရေးတာလေ။ခုလောက်ဆို programming language ဆိုတာနဲ့ technology ဆိုတာကြီးကိုနည်းနည်း ခွဲခြားသိလို့ ရပြီ ထင်ပါတယ်နော်။ ဘိုင်ဒဝေး(စကားမစပ်ပေါ့နော်)programming language တွေထဲမှာ 3P တတ်ရင် ထမင်းမငတ်ဘူးဆိုလားပဲ။ အဲဒီပီသုံးလုံးကတော့ Python, Pearl နဲ့ PHP ဆိုပဲ (PHP က သူကိုယ်တိုင်ပဲprogramming language, သူကိုယ်တိုင်ပဲ platform သို့မဟုတ် technologyပါတဲ့ )Web Application ဆိုတာလေးကို ဆက်ပြောပါရစေဦး။သူက Client-Server ပုံစံနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါသတဲ့ ။ တနည်းအားဖြင့် Statelessပုံစံ သို့မဟုတ် request-response-forget လို့လဲ ဆိုနိုင်ပါတယ်။Client(သုံးတဲ့သူ) ဖက်မှာက web site တခုကို ကြည့်ဖို့ သုံးဖို့ ဆိုရင်browser တွေရဲ့ အကူအညီ လိုပါတယ်။ကျမတို့ သုံးနေကြတာကတော့ version မတူကြပေမဲ့ များသောအားဖြင့် InternetExplorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape Navigator တို့ စသဖြင့်ဖြစ်ကြတယ်နော်။Web Server တွေ အနေနဲ့ ကတော့ web application ရေးထားတဲ့ technologiesတွေဖြစ်တဲ့ ASP. Net, PHP, ColdFusion(Dead technology) တို့ပေါ်မူတည်ပြီးIIS, TomCat, Apache တို့ စတဲ့ web server တွေ သုံးရပါတယ်။ client ကwebsite application တခုကို request လုပ်လာလို့ ရှိရင် web serverဘက်ကနေပြီး HTML ဖိုင်တခုနဲ့ response ပြန်လေ့ ရှိတာပါ။ server sideအနေနဲ့ က တခုပြောစရာရှိတာက client ၏ request တိုင်းသည် သူ့ အတွက်အသစ်ဖြစ်နေတတ်ပြီး အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုလို့ ရှိရင် သူက responseလုပ်ပြီးတိုင်း သူ့ရဲ့ memory ထဲကနေ ချက်ချင်း ပြန်ဖယ်ထုတ်သွားလေ့ရှိတာပါ။ ဒါကြောင့် အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို Web Application ဆိုတာrequest-response-forget လို့လဲ ဆိုခဲ့တာပါ။ အဲဒီလို current user ရဲ့information တွေကို မှတ်မထားတဲ့ ပုံစံ stateless ပုံစံကို ASP. Netမှာတော့ State Management ဆိုပြီး မှတ်မိနေစေတဲ့ အားသာချက်တွေဖြစ်အောင်ရေးနိုင် သုံးနိုင်ပါတယ်။ (အဲဒီအကြောင်းကို ပို့စ်တစ်ခု သီးသန့်အသေးစိတ် ရေးပါဦးမယ်နော်)ဆက်ရန်......
ဟိုက် ဟိုက် ဟိုက်ရှားပါးပို့စ်ကို ဖတ်လိုက်ရတာ Language ရွာကြီးထဲ ရောက်သွားသလိုပဲ :P အနော်တော့ တစ်ထုမှ မတိဝူးစကားမစပ် ခွေးနက်ကြီးဆိုတာကdot ( dog or . ) = ခွေးnet = နက်ထို့ကြောင့် ခွေးနက်ကြီးဖြစ်သည် :P
မိုက်တယ်ဗျာ .. ဆက်လုပ်ဗျိုး...:D
ကွန်ပြူတာ နည်းပညာဆွေးနွေးပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ
သင်္ကြန်ကျရင်..ရေပက်မယ်၊ သူငယ်ချင်းတို့ရော ဘာလုပ်မလဲ...
လှိုင်သာယာ (ရေဥက္ကံ) သို့ မီးဘေးအလှူ
ကိုကြီးစေးထူးသို့ ပေးစာ (သို့ ) အဆင်မပြေမှုများအတွက...
ကိုကြီးစေးထူးရဲ့ ကော့မှူးဆေးခန်းအတွက် အလှူ